ရိုက်ကူးပြီး ငါးနှစ်ကျော်ကြာမှ ရုံတင်ပြသခွင့်ရရှိသည့် 'မှော်ဝင်သမန်းကျား' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာ?? - Yangon Media Group
ရိုက်ကူးပြီး ငါးနှစ်ကျော်ကြာမှ ရုံတင်ပြသခွင့်ရရှိသည့် ‘မှော်ဝင်သမန်းကျား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာ??
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးပြီး ငါးနှစ် ကျော်ကြာမှ ရုံတင်ပြသခွင့်ရရှိ သည့်’မှော်ဝင်သမန်းကျား’ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးကို နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်မှစတင်ကာ တစ်နိုင်ငံလုံးအ တိုင်းအတာဖြင့် ရုံတင်ပြသတော့ မည်ဖြစ်သည်။ ‘မှော်ဝင်သမန်းကျား’ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဘန်ကောက်၌ ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီဇာတ်ကားက ရိုက်ကူးပြီး နှစ်တော်တော်ကြာတော့မှ ရုံတင် ပြသခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပရို ဂျူဆာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထမ်း ထားရတဲ့ဝန်ကလည်း တော်တော် ကိုကြီးပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကား တစ်ကားအနေနဲ့အောင်မြင်စေ ချင်ဘယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးအပင် ပန်းခံထားတဲ့အပြင် ငွေလည်းအ များကြီးကုန်ထားတယ်။ အချိန်တွေ လည်း အများကြီးပေးထားခဲ့ရတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေလည်း ရကြ တယ်”ဟု သရုပ်ဆောင် လင်းဇာ နည်ဇော်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီးကို ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)မှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် ရန်အောင်၊ မင်း မော်ကွန်း၊ သူထူးစံ၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ လင်းဇာနည်ဇော်၊ ခွန်းဆင့်နေခြည်နှင့် သရုပ်ဆောင်များစွာတို့မှ ပါဝင်ထားသော ဇာတ်ကားကြီးတစ် ကားဖြစ်သည်။ ‘မှော်ဝင်သမန်းကျား’ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးသည် လူတစ်ပိုင်း၊ ကျားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေသူတစ်ယောက် ၏ပုံစံနှင့် မိခင်မေတ္တာကို ဖော်ကျူး ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကားကြီး တစ်ကားလည်းဖြစ်သည်။